လူမှုမီဒီယာ + Analytics = တိ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 8, 2010 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါမင်းကိုမင်းမေးချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်အရင်းအမြစ်ကသင့်ဆိုဒ်၊ တွစ်တာ (သို့) ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဆီကိုပိုပြီးလမ်းကြောင်းများများပို့ပေးသလဲ။ မင်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ။ ဝဘ်အများစု analytics အသုံးပြုသူများသည် log in လုပ်၍ ၄ င်းတို့ကိုရည်ညွှန်းသည့်ရင်းမြစ်များကိုကြည့်ပြီးတန်ဖိုးကိုရလိမ့်မည်။ ဒါကပြaနာပါ။
အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်“ twitter.com” ကိုရည်ညွှန်းသည့်အရင်းအမြစ်အဖြစ်ထည့်သွင်းပြီး၎င်းသည်လှည့်ကွက်ဟုထင်ကြသည်။ မဟုတ်ပါ။ twitter.com မှဝင်ရောက်လာသော visitors ည့်သည်အရေအတွက်မှာပွင့်လင်းသော twitter.com ဝက်ဘ်စာမျက်နှာမှ link တစ်ခုကို နှိပ်၍ သင်၏စာမျက်နှာသို့ဝင်ရောက်သူများသာဖြစ်သည်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုမယုံလျှင်, အောက်ကမှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြည့်ပါ hootsuite.com နှင့်ထံမှ twitter.com:
အနည်းဆုံးနှင့်အတူHootsuite, သင်တစ် ဦး ရည်ညွှန်း site ကိုကြည့်ရှုပါ .... ။ မင်းလား ကောင်းပြီ, ငါအသုံးချလျှင်Hootsuite ငါ့ Droid ဒါမှမဟုတ် iPhone မှာ application ကိုငါတကယ်မမြင်ဘူးHootsuite ရည်ညွှန်း site ကိုအဖြစ်! တကယ်တော့ application များမှလာတဲ့ link တွေကိုအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် အဘယ်သူမျှမ referrer နှင့်အတူတိုက်ရိုက်အသွားအလာ.
Ouch ။ ပြီးတော့ပိုဆိုးလာတယ်။
Application များကို twittervers ကလွှမ်းမိုးထားပြီး Facebook နှင့်လည်းစတင်ပေါ်ထွက်လာသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်မိုဘိုင်းသို့ပြောင်းသွားသည်နှင့်အမျှငါတို့အားလုံးသည်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အလုပ်လုပ်နေကြသည်။ ငါ Facebook ပေါ်မှာ chat လုပ်ဖို့ Adium ကိုသုံးတယ်။ ဒါကြောင့် Facebook သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကငါ့ဆီပို့ပေးလိုက်တဲ့ link ကိုအချိန်မရွေးနှိပ်လို့ရတယ်။ အသွားအလာလုံးဝ Facebook ကိုမပြောပါဘူး။ ဒါဟာအဖြစ်ပြသထားတယ် အဘယ်သူမျှမ referrer နှင့်အတူတိုက်ရိုက်အလည်အပတ်ခရီး.
ရလဒ်အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီများသည်မပြည့်စုံမှုအပေါ်မှီခိုခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏လူမှုမီဒီယာအသွားအလာကိုလျှော့တွက်နေကြသည် analytics။ အွန်လိုင်းကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ဂူဂဲလ်ကိုအသုံးပြုသောကြောင့်၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်မဟုတ်ပါ။ Google ကတည်ဆောက်မယ်ဆိုတာသံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းပါတယ် analytics မှာ၎င်း၏မိတ်ဆွေများမှတံခါးပေါက် Facebook က or တွစ်တာ။ ဒါဆိုကုမ္ပဏီတစ်ခုလုပ်ဖို့ဘာလဲ။
ပထမ ဦး စွာသင်သည်တတိယပါတီတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည် analytics tool ကို။ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များနှင့် Webtrends ရှိသူငယ်ချင်းများသည် bit.ly နှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်မှာရွေ့လျားသွားလိမ့်မည် analytics ကမ္ဘာကြီးကို။
အသစ်တစ်ခုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမရှိဘဲ analytics သင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိနေသေးတယ်။
ပထမဆုံးကတော့သင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ Twitter ရဲ့တရား ၀ င် retweet ခလုတ်ကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်တယ်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကုဒ်ထည့်သွင်းရန်ခလုတ်ကိုသင်၏ခလုတ်သို့ပြန်သွားမည့်ခြေရာခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် bit.ly ကဲ့သို့သောတတိယပါတီကို အသုံးပြု၍ အတိုချုံးနိုင်သည်။ ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ် bit.ly ရဲ့လိုလားသူဝန်ဆောင်မှု သင့်ကိုယ်ပိုင်အတိုကောက် URL ကိုအသုံးချရန်။ သင်ဤသို့ပြုလုပ်ပါကလူများသည် URL ကိုကော်ပီကူးရန်နှင့်ကူးယူရန်နှင့်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်တိုရန်ဖြစ်နိုင်ချေနည်းသည်။
ဒုတိယတစ်ခုကသင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးခြေရာခံခြင်း querystring ကို URL သို့မထည့်မီထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားတွစ်တာကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုပေးပြီးသင့်အားသင်ရည်ညွှန်းနေသည့်စုစုပေါင်းအသွားအလာကို ပို၍ တိကျမှန်ကန်သောအတိုင်းအတာဖြင့်ပေးနိုင်သည်။
သင်၏ blog feed ကိုတွစ်တာသို့တွန်းပို့လျှင်၎င်းကဲ့သို့သောကိရိယာမျိုးကိုအသုံးပြုသည် twitterfeedသင်သည် Google Analytics ၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကုဒ်ကိုဖြည့်စွက်ပြီးသင်၏ bit.ly အကောင့်ဖြင့်အလိုအလျောက်အတိုကောက်လုပ်နိုင်သည်။ သင်၏အနေဖြင့် Twitterfeed မှသင်၏ feed ကို the ည့်သည်များမှလာရောက်ခြင်းသည်မေးခွန်းထုတ်စရာမရှိပါ။
Facebookstring ခလုတ်ကို hack ရန်မကြိုးစားပါ။ ကျွန်ုပ်သည် querystring တစ်ခုထဲသို့ထည့်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားနေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအချက်၏သက်ရောက်မှုကိုမသေချာပါ။ သို့သော်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင့်တွင်ကြိုက်နှစ်သက်သောနာမည်နှစ်မျိုးရှိသည့်သင့်၏စည်းရုံးလှုံဆော်ရေးကုဒ်နှင့်တစ်ခုမပါသည့်ကွဲပြားသော URL နှစ်ခုရှိသောနေရာတွင်ပြtroubleနာတက်နိုင်သည်။
အဓိကအချက်မှာသင်၏ဆိုဒ်သည်သင်ဆိုရှယ်မီဒီယာရင်းမြစ်များမှထင်သည်ထက်အများကြီးပိုအသွားအလာကိုမြင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်စားပွဲတင်အက်ပလီကေးရှင်းများသည်ထိုလည်ပတ်မှု၏တန်ဖိုးများကိုလွဲမှားစေပြီးထို visitors ည့်သည်များမည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အပိုအလုပ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုအချို့ကိုမတွေ့မှီတိုင်အောင် analyticsသင်သည်ဤကွာဟမှုကိုဂရုပြုရမည်။
Tags: analyticsမကောင်းတဲ့တိုင်းတာခြင်းတိုက်ရိုက်အသွားအလာလွှဲပြောင်းအသွားအလာလူမှုမီဒီယာ attributionလူမှုမီဒီယာစိန်ခေါ်မှုများလူမှုရေးလွှဲပြောင်းအသွားအလာlink ကိုရည်ညွှန်း twitter
4:2010 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 35
Doug, စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ post - ဒီဟာငါမကြာသေးခင်ကသတိထားမိခဲ့တဲ့ပြexactနာပဲ။ TwitterFeed ကို အသုံးပြု၍ GA ခြေရာခံခြင်းကိုသင်ပေါင်းထည့်နိုင်ကြောင်းသင်ဖော်ပြပြီးပါပြီ၊ သို့သော်ထို option သည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
6:2011 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 2, 07
Doug, ဘယ်သူမှဒီဟာကိုဘယ်သူမှမှတ်ချက်မပေးသေးဘူးမယုံဘူး တကယ်တော့ငါဟာအခုအချိန်မှာဆင်တူတဲ့ post တစ်ခုကိုရေးနေပြီးငါဒီတစ်ခုရည်ညွှန်းချင်တယ်ဆိုတာသတိရမိတယ်။ ဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ post ကိုမှပြန်ချိတ်ဆက်ဖို့သေချာပါလိမ့်မယ်။
ဇွန် 29, 2011 မှာ 2: 46 pm တွင်
ဒီကြီးမြတ်တဲ့ post ကိုဘယ်သူမှမှတ်ချက်မပေးခဲ့တာငါအရမ်းအံ့အားသင့်မိတယ်။ ငါ start up အတွက်အလုပ်လုပ်သည်http://www.growsocially.com) ပြီးတော့ငါတို့ဒီပြproblemနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်။